Thenga i-HGH yasekuqaleni evela ePfizer eThailand - iGenotropin GoQuick Pen 12mg
I-Genotropin GoQuick I-Pen 12mg (36IU) x XUMUMX
Xabiso rhoqo 0.00 ฿ 112,000.00 ฿ ukuthengiswa
Ngokusekelwe kwiingxelo ze-18 Bhala uhlolo
- iGenotropin GoQuick Ipeni ye12mg (36IU)
- Utywala swab
- BD Ultra Fine Pen Izixhobo
Isitya sokupholisa isifo (i-2-8 degrees)
Imiyalelo yokusetyenziswa (iFayile yefayile)
Izinto eziphathekayo: Somatropin
CCF: I-hormone yokukhula
Umenzi: NGOKUBA MFG. IBELGIUM NV (iBelgium)
I-hormone yokukhula kweziyobisi. Imela ukuhlanganiswa okwenziwa ngamashishini aphindaphindiweyo somatropin, afana ne-hormone yokukhula kwabantu. Abantwana abanqongophala be-hormone yokukhula engapheliyo, kunye ne-Prader-Willi i-syndrome yenyuka yenyuka kwaye ikhawuleza ukukhula okusemgangathweni kwamathambo. Njengabantu abadala, kunye nabantwana basematropin bagcina isakhiwo somzimba esifanelekileyo, sikhuthaze ukukhula kwemisipha kunye nokukhuthaza ukuhlanganiswa kwamafutha. Eyona nto ikhathalele kwi-somatropin visceral adipose tissue. Ukongezelela ekuvuseleleni i-lipolysis, i-somatropin inciphisa ukungena kwe-triglycerides kuma-fat depots. Ngaphandle koko, iziyobisi zichaphazela i-fat, i-carbohydrate kunye nesetyuli yamanzi. I-Somatropin ivuselela i-LDL receptors kwisibindi, kwaye isebenza kwiipiliti kunye neepoprotein profile kwi-serum. Ngokuqhelekileyo, izigulane zesifo se-somatropin kunye nokulahleka kwe-hormone yokunciphisa ukunciphisa i-LDL ye-cholesterol kunye ne-apolipoprothein B kwi-serum. Kwakhona, kunokuncitshiswa kwe-cholesterol eseleyo. I-Somatropin iphakamisa amanqanaba e-insulin, Nangona kunjalo, amazinga e-glucose ngokuzila ngokuqhelekileyo akatshintshi. Abantwana abane-hypopituitarism banokuzila ukutya kwe-hypoglycemia, baxakeke kwizigulane ezifumana iziyobisi. I-Somatropin ibuyisela umthamo we-plasma kunye ne-tissue fluid, iyancitshiswa ngokungabikho kokuhluma kwe-hormone; ikhuthaza ukugcinwa kwe-sodium, i-potassium ne-phosphorus. I-Somatropin ivuselela isifo seetabolism. Kwizigulane ezinokukhubazeka kwehommone yokukhula kunye ne-osteoporosis somatropin unyango olude lukhokelela ekubuyiseni ukuveliswa kwamaminerali kunye nokuxinwa kwethambo. Ukwelashwa kwe-Somatropin kwandisa amandla omzimba kunye nokunyamezela komzimba. I-Somatropin iphinda ikhulise umkhiqizo wentliziyo, kodwa umbane wale mpawu awukaziwa. Inendima engayidlala ekunciphiseni ukuxhatshazwa kwe-vascular peripheral. Kwizigulane ezinokukhubazeka kwehommoni ukukhula kunokuba kuhla kwezakhono zengqondo kunye noshintsho kwimeko yengqondo. I-Somatropin ikhulisa ubungqina, iphucula imemori kwaye ichaphazela ukulinganisela kwama-neurotransmitters engqondweni.
Njengabantu abasempilweni, kwaye kwizigulane ezinokukhubazeka kwehommone ukukhula malunga ne-80% n / yangena kwiGenotropin®. Xa i-p / injection dose i-0.1 IU / kg ubunzima bomzimba I-Cmax yi-13-35 ng / ml ifinyelelwe emva kwe-3-6 no. I-Vd yi-0.5-2.1 l / kg.
I-Metabolism kunye ne-excretion
Biotransformiroetsa intliziyo kunye nesibindi. Umlinganiselo we-T1 / 2 emva kokuya / kwiGenotropin® kwizigulane ezinokukhubazeka kwehommoni yokukhula ngokumalunga ne-0.4 no. Xa s / ukuqaliswa kweziyobisi i-T1 / 2 ifinyelela ku-2-3 no. Ukwahlukana okuphawulekileyo, mhlawumbi, kuhambelana nokuxothwa kwexesha elide kwi-n / injection. Mayelana ne-0.1% yezilwanyana ezilawulwayo ngokungatshintshi ifom ekhutshwe kwi-bile.
I-Pharmacokinetics kwiimeko ezikhethekileyo zeklinikhi
Ukuhlaziywa ngokupheleleyo kweGenotropin® xa s / kuya kufanayo kubantu besilisa nabesifazane.
Imiphumo emibi, ebangelwa ukugcinwa kwamanzi: umntu omdala (> 1% kunye <10%) - i-edema yengingqi, i-pastoznost ephezulu, i-artralgii, i-myalgia kunye ne-paraesthesia. Ezi mpawu zidla ngokuqhelekileyo zincinci okanye zincinci, zenzeka ngeenyanga zokuqala zonyango kwaye zinciphisa ngokukhawuleza okanye emva kokunciphisa umthamo. Ubume beempembelelo ezixhomekeke kwiDenotropin®, ubudala bezigulane kwaye, mhlawumbi, ngokungafaniyo ngokweminyaka, apho ukungakwazi ukukhula kwehomoni. Kubantwana, ezi ziphumo zingabonakali (> 0.1% kunye <1%). I-CNS: ayinqabile (> 0.01% kunye <0.1%) - ingozi yongcinezelo yongcinezelo, ingaba nokuvuvukala kwentsholongwane ye-optic. Kwinqanaba le-endocrine: inqabile (> 0.01% kunye <0.1%) - uphuhliso lwe-diabetes mellitus type 2. Kwakhona kubonisa ukuhla kwe-cortisol ye-serum. Ukubaluleka kweklinikhi yale nzeka kubonakala kukukhawulelana. Kwinqanaba le-musculoskelet system: ukuchithwa kunye nokuxhaswa kwentloko ye-wesifazane, soprovozhdaющiesя prihramыvaniem, intlungu e-hip kunye namadolo; kwizigulane ezine-Prader-Willi syndrome zinokuphuhlisa i-scoliosis (tk. iGenotropin® Yandisa izinga lokukhula); inqabile - i-myositis, enokubangelwa yintshukumo yokugcina i-m-cresol, eyinxalenye yeGenotropin®.
Ukuphendulwa kwe-allergenic: ukugquma kwesikhumba nokutshiza.
Ukuphendula kwendawo: kwisayithi yomjovo (> 1% kunye <10%) - ukugqithisa, ukuchithwa, ukunyamezela, ukugubha, ukunyakaza, ukuvuvukala, i-lipoatrophy.
Eminye: kwiimeko ezimbalwa (<0.01%) - Ukuphuhliswa kwe-leukemia kubantwana, nangona kunjalo, iziganeko ze-leukemia azifani noko kubantwana abangenakho ukukhula kwe-hormone.
- Iimpawu zokukhula kwesisu, kuquka ukukhula okungalawulekiyo kwe-tumor tumors (intra-inflammatory treatment) kufuneka igqitywe ngaphambi kokuqaliswa kwonyango iGenotropin®);
- Isimo esibucayi, ukuphucula ngokukhawuleza kwizigulane ngenxa yokuhlinzwa kwintliziyo evulekile okanye esiswini, uxinzelelo oluninzi kunye noxinzelelo olunzulu lokuphefumula;
- Ukugqithisa okunzima (umlinganiselo wesisindo somzimba / ukuphakama kudlula i-200%) okanye izifo ezinzima zokuphefumula kwizigulane ezine-Prader-Willi syndrome;
- Ukuvalwa kweendawo zokukhula kweepiphyseal zamathambo ende;
- Hypersensitive to any component of the drug.
UKUSETYENZISWA kufanele kubekwe kwizigulane ezineesifo sikashukela, ingozi yexinzelelo, isifo se-gipotireoze.
UKUPHATHWA KWEENKQUBO NOKUSEBENZA
Amava okliniki kunye noGenotropin® ngexesha lokukhulelwa lilinganiselwe. Ngoko ke, ngexesha lokukhulelwa kufuneka kuhlalutye ngokucacileyo imfuno yokutyunjwa kweziyobisi kunye nobungozi obunokwenzeka, oluhambelana nalo. Ngexesha eliqhelekileyo lokukhulelwa kwe-hormone yokukhula kwe-pituitary ngokunciphisa kakhulu emva kwe-20 yeveki, ithatyathelisiwe ngokugqithiseleyo ngeveki ye-30 iveki, kwaye ngoko ke imfuneko yokuqhubeka unyango olusetyenzisiweyo uGenotropin® kwi-III trimester yokukhulelwa akunakwenzeka. Ucwaningo lwezilwanyana aluzange luchaze nayiphi na imiphumo emibi emntwaneni, okungafuneki ukuba kukho, ukuba iziphumo ezifanayo ziya kufumaneka xa usebenzisa iGototropin®. Ulwazi olunokwethenjelwa malunga ne-hormone yokukhula ebisi yobisi alukho, kodwa nakubani na ke, ukufunyanwa kweprotheni ehambileyo ukusuka kwinqanaba lomzimba lomntwana akunakwenzeka kakhulu.
Iimeko zokugqithisa ngokweqile iGenotropin® engaziwayo. Iimpawu: ngokugqithisa ngokweqile kunokwenzeka u-hypoglycemia, kunye ne-hyperglycemia. Ukugqithiswa kwexesha elide kunokwenzeka ukuba kuvele iimpawu zokudlulela kwe-hormone yokukhula kwabantu (akromegalija, gigantizm). Unyango: ukususwa kweziyobisi, unyango lwe-simptomaticheskaya.
I-GCS kwisicelo esifanelekileyo inciphisa umphumo oshukumisayo weGenotropin® kwinkqubo yokukhula. Ukusetyenziswa ngokufanayo ngexesha likaGenotropin® kunye ne-thyroxin enobuchopho obunokuthi uhlakulele.
IMITHETHO YOKUNIKEZELA KWAMAPARMACIES
Isilwanyana sikhishwe phantsi komyalelo.
IMITHETHO NEMIGAQO YOKWENZA
Isiza kufuneka sigcinwe ngaphandle kofikelelo lwabantwana, indawo emnyama kwindawo yokushisa ye-2 ° ukuya ku-8 ° C. Ubomi beShelf - unyaka we-3. Isisombululo esipheleleyo singagcinwa kwifriji (kwiqondo lokushisa ukusuka kwi-2 ° ukuya ku-8 ° C) ngeeveki ze-4. Gwema ukukhanda okanye i-cartridge, akukho sisombululo esilungileyo.